ပရိုမိုးရှငျး ProSkin Face Spa & Aesthetic Center
အလှတရားဆိုတာ ကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိပါဘူး… ရခဲတဲ့ လူဘဝလေးမှာ နေ့ရက်တိုင်းကို ယုံကြည်မူရှိရှိ လှလှပပလေးနဲ့ အထာကျကျဖြတ်သန်းကြမယ်…
2019 မှာကိုယ့်ရဲ့ ရှိရင်းစွဲ အလှလေးကိုမှ ပိုမိုထင်ပေါ်ချင်သူလေးတွေအတွက် Pro Skin ရဲ့ Treament များကို Promotion လေးတွေနဲ့အတူ ကိုယ့်ရဲ့အလှကို Pro Skin မှာပုံဖော်လိုက်ကြရအောင်…
ကိုးရီးယားလေးတွေလို မျက်နှာလေးသွယ်ပြီး V Shape ဖြစ်ချင်တာလား? အခုခေတ်စားနေတဲ့ မျက်နှာလေး Glow ချင်တာလား? ဒါမှမဟုတ် ဝက်ခြံ၊ တင်းတိပ် တွေကင်းတဲ့ သဘာဝ အလှတရားလေး ပေါ်လွင်ချင်တဲ့သူလား?
မျက်နှာ V Shape ပုံဖော်ချင်သူလေးတွေအတွက်ရော မျက်နှာလေးကြည်လင် ဝင်းလက်ပြီး Glow ချင်သူလေးတွေအတွက် Facial Glow Treament အတွက်ကတော့ (20%) Off တောင်ပေးထားပြီး ဝက်ခြံ၊တင်းတိတ်၊ အထူးကုသခြင်းကိုတော့ (15%) Off ဆိုပေးမှာဆိုတော့ ကုန်ကျစရိတ်သက်သက်သာသာနဲ့ အတူအလှတရားလေးတွေထုတ်ဖော်နိုင်ဖို့ အခွင့်ရေးမို့ လက်လွှတ်မခံစေချင်ပါဘူးနော်..
ဒါတင်မကသေးဘူး.. B&F Weekly Promotions ရဲ့ Coupon ပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ Mobile Application နဲ့ဖြစ်ဖြစ် လာရောက်တဲ့ Customer တစ်ဦးချင်းစီကို Proskin ရဲ့ (VIP Card ) ကို လက်ဆောင်ပေးဦးမှာဆိုတော့ တွေဝေနေဖို့မလိုတော့ဘူးနော်…
Pro Skin - Face Spa & Aesthetic Center လိပ်စာလေးကတော့
Buliding No. (14), Room (7/B), 6th Floor, Shin Saw Pu, Pagoda Road, Myat Noe Thu Condo, San Chaung Township.
ဖုန်းနံပါတ် - 09 777 66 98 98
ဒီ Promotions ကြီးတွေကို ရယူနိုင်ဖို့ဆိုရင် B&F Weekly Promotions Coupon နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ Mobile App လေးတွေနဲ့ အသုံးပြုပြီးတော့ ရယူနိုင်ပါတယ်နော်…
Mobile App လေးနဲ့သွားရောက်အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ အသုံးပြုလိုတယ်ဆိုရင်တော့ Use Now ဆိုတဲ့ ခလုတ်လေးကို နှိပ်ပြီး ကျလာတဲ့ Success စာမျက်နှာလေးကို Pro Skin ဆိုင်လေးကို ပြလိုက်ရုံနဲ့ Promotions ကြီးကိုရရှိနိုင်မှာပါ။
အသေးစိတ်သိလိုတယ်ဆိုရင်တော့ 09-969910128, 09-969910115 တို့ကို ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
ProSkin Face Spa & Aesthetic Center ဆိုငျ
ဖုနျးနံပါတျ : 09 9777 669898